महिलाहरु यस्ता पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न चाहदैनन ? यस्तो छ कारण - ramechhapkhabar.com
महिलाहरु यस्ता पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न चाहदैनन ? यस्तो छ कारण
तपाई कसैलाई आफु प्रति आकर्षित गर्न के गर्नु हुन्छ । मेकअप, राम्रो पहिरन वा अन्य केहि रु हालै गरिएको एक अध्ययनका अनुसार कसैलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न तथा आफ्नो पार्टनरलाई रिझाउन तपाईको सुगन्धले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखाएको छ ।
कसैलाई ‘से’क्सुअ’ल्ली अट्रेक्ट’ गर्न पैसा, सुन्दरता तथा फिगरलगायत कुरा तपाईको सुगन्धको अगाडि सब बेकार हुन सक्छन्।एक्स्ट्रा मेरिटल डेटिङ साइट भिक्टोरिया मिलनले १२ देशका ती मानिसमाथि अनुसन्धान गरेको थियो, जो आफ्नो पार्टनरसँग चीट गरिरहेका थिए।
उनीहरुको उक्त धो’के’बाजीको कारणबारे सोध्दा हैरान गर्ने करण सामुन्ने आयो। उनीहरुले भनेका कुराहरुबाट थाहा हुन्छ कि तपाईको शरी’रको सु’गन्धको कति ठूलो भूमिका हुन्छ।अध्ययनमा सामेल ७८ प्रतिशत महिलाले शरीरबाट नराम्रो गन्ध आउने पुरुषसँग रात बिताउनु भन्दा उनीहरु एक्लै घर जान मन पराउने बताए।
तर पुरुषहरुको प्राथमिकता भने अगल छ। अध्ययनमा सामिल १० मध्ये ५ जना पुरुषले भनेका छन् कि कुनै महिलासँग बेडरुममा गएपछि कुनै पनि प्रकारको गन्धले उनीहरुलाई फरक पार्दैन्।यद्यपी अध्ययनमा सामेल भएका ५३ प्रतिशत महिलाहरुले आफूहरुलाई प्राकृतिक गन्ध आउने पुरुष मन पर्ने बताए।
६३ प्रतिशत पुरुषहरुले पनि महिलाका बारेमा यस्तै प्रकारको राय व्यक्त गरे। अध्ययनमा सामेल ५० प्रतिशत महिलाले यो पनि भने कि, कुनै जोडीको सम्बन्ध टुट्नुमा पर्टनरको नराम्रो गन्धको पनि भूमिका हुन्छ। खराब स्मेलका कारण उनीहरु रोमाञ्स गर्न सक्दैनन्।
एजेन्सी । एक जना महिलाले कति जना पुरुषसँग विवाह गर्लिन, एकजनासँग वा दुईजनासँग । तर एक महिलाले भने विवाहमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेकी छन् । एकपछि अर्को गर्दै ती महिलाले ९ जना पुरुषसँग प्रेम विवाह गरिन् ।
घटना सार्वजनिक भएपछि महिलाका आठौं पतिले प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गरे । प्रहरीले उक्त घटनामा सम्झौताका लागि धेरै प्रयास गर्यो । तर कुरा मिलेन । महिलाले नवौं पतिसँग प्रेम गरेको बताइन् र उनीसँगै हिँडिन् ।
प्रहरीका अनुसार भारतको लखीमपुर शहरको सदर क्षेत्रमा बस्ने महिलाको १० वर्ष पहिले सोही ठाउँका एक युवकसँग विवाह गरेकी थिइन् । केही दिनपछि पती–पत्नीबीच खटपट भयो ।
त्यसपछि महिलाले पतिसँगको नाता तोडेर आफ्नै मर्जीले दोस्रो युवकसँग विवाह गरिन् । दोस्रो पुरुषसँग पनि केही समय विताएर उनले तेस्रो पुरुषसँग विवाह गरिन् ।
तर तेस्रो पुरुषसँगको सम्बन्ध पनि धेरै दिन टिक्न सकेन । हरेक पटक महिलाको उनका पतिसँग मनमुटाव हुँदै आयो र उनले जतिपटक मनमुटाव भयो सम्बन्ध तोड्दै नयाँ पुरुषलाई आफ्नो जीवनसाथी बनाउँदै गइन् ।
आठौं पटकको विवाह पछि सम्बन्धमा केही स्थायित्व आयो । फरधान भन्ने ठाउँका एक व्यक्तिसँग विवाह गरेपछि ती महिला उनीसँग करिब ५ वर्ष सम्बन्धमा बसिन् । सम्बन्धमा रहँदा उनी ४ वटा बच्चाकी आमा बनिन् ।
समय अगाडि बढ्दै थियो तर, फेरि पति र पत्नीबीच विवाद भयो । आठौं पतिसँग बस्ने मन नलागे पछि ती महिलाले अर्को पुरुषसँग नवौंपटक विवाह गरेर फरधान छाडेर मोहम्मदी भन्ने ठाउँमा आएर बस्न लागिन् ।
तर आठौं पतिले उनीविरुद्ध फरधान प्रहरी चौकीमा रिपार्ट दर्ता गराए र मोहम्मदी भन्ने ठाउँका युवकले आफ्नो पत्नी भगाएको आरोप लगाए ।
त्यसपछि प्रहरीले महिला र उसका नवौं पतिको खोजी शुरु गर्यो । खोजी शुरु गरेको केही दिनपछि प्रहरीले महिला र उनका नवौं पतिलाई पक्राउ गरि उनीहरुलाई स्थानीय अदालतमा पेश गरिएको थियो ।
महिलाले आफू नवौं पतिसँग बस्न इच्छुक रहेको बयान दिएपछि अदालतले आठौं पतिले दायर गरेको मुद्दा खारेज गरिदिएको छ ।